“Madrid waa gurigeyga labaad” – Gerard Piqué – Gool FM
(Madrid) 15 Nof 2019. Daafaca kooxda Barcelona ee Gerard Piqué ayaa qirtay jaceylka uu u qabo Madrid, isagoo sheegay inuu u arko inay tahay gurigiisa labaad.
Inkasta uu naceyb u dhexeeyo kooxaha Barcelona iyo Real Madrid, iyo sidoo kale colaada siyaasadeed ee u dhaxeysa gobolka Catalunia iyo caasimada Madrid, sababa la xiriira rabitaanka ah in Catalonia ay ka go’do Spain inteeda kale, haddana Gerard Piqué ayaa qirtay jaceylka uu u qabo Madrid.
Haddaba Gerard Piqué ayaa wareysi uu ku bixiyay Raadiyaha “Cadena COPE” ee dalka Spain ayaa wuxuu ku sheegay:
“Madrid waa sida gurigeyga labaad, waxaan xilli kasta dareensanahay diiranaanta iyo jacaylka halkaa ka jira”.
“Ma dareemin, dareen xun ee ku aadan Madrid, inkastoo uu loolan kala dhaxeeyo Barcelona, waxay noqon kartaa wax la yaab leh, laakiin waxaan saacado iyo saacado ku dhex wareegayay halkan Madrid, waxaan sawiro la galay dadka halkan jooga, tartanka waa garoonka oo kaliya, ee maahan wadada”.
Intaas kaddib Gerard Piqué ayaa la weydiiyay su’aal aheyd haddii uu xulkiisa qaranka Spain kala qeyb galayo ciyaaraha Olimbikada ee ka dhici doono Tokyo, wuxuuna ku jawaabay:
“Ma ogi haddii aan aadayo ciyaaraha Olimbikada ee Tokyo ama haddii kale, laakiin albaabada gadaal kama xiri doono, isla markaana kuma qasbi doono Tababaraha”.
“Si kastaba ha noqotee, waxaan jeclaan lahaa inaan la hadlo tababaraha, mana ahan inaan arrintaas ku sameeyo meel fagaare ah”.